मानहुँकोटको लोभलाग्दो चर्चा, आउँछन् हजारौँ पर्यटक ! – Khabarhouse
मानहुँकोटको लोभलाग्दो चर्चा, आउँछन् हजारौँ पर्यटक !
Khabar house | ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०६:०० | Comments
तनहुँ, मङ्सिर ६ गते । केही समयअघिसम्म गुमनाम रहेको मानहुँकोटकाे हिजो आज जताततै चर्चा छ । यति बेला मानहुँकोटमा कमिलाको जस्तै लस्करै मान्छेका ताँती देखिन्छ । दमौली बजार कुहिरोको घुम्टो ओढेको लोभलाग्दो दृश्य हेर्न दैनिक हजारौँ पर्यटक ओहिरिन्छन् । एकाएक पर्यटकको भीड लागेपछि व्यास नगरपालिका–५ स्थित मानहुँकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरु थप्न तीन तहकै सरकारलाई दबाव परेको छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधारको अध्ययन गर्न मानहुँमा मन्त्री र सांसदको समेत जमघट हुन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ, प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, कलिला खान, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आशा कोईराला र व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेसहितको टोलीले हालै मानहुँमा पुगेर पर्यटकको आर्कषणलाई स्थायित्व दिन थप आर्कषित बनाउने बनाउन गर्नुपर्ने विकासका पूर्वाधारको बारेमा अध्ययन गरिएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेशका दुवै प्रतिनिधिले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको वडाअध्यक्ष तथा व्यास नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । सङ्घीय सरकारले पनि हालै एक टोली अध्ययनको लागि पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । व्यास नगर पालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सोचेभन्दा बढी मानिस आएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका गर्न तत्काललाई ३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बोर्ड बैठकले शौचालय, खानेपानी व्यवस्थापनको लागि तत्कालै २५ लाख र गुरुयोजनाको लागि पाँच लाख गरी उक्त रकम व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
हरेक शहीद दिवसमा मानहुँबाट शहीदहरुको गाउँ पुलिम¥याङ सम्म म्याराथन दौड प्रतियोगिता गरिएको नगर प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । पच्चीस लाख रुपियाँको लागतमा रेलिङबार निर्माण गरिएको र ३७ लाखमा भ्यू टावर, चमेना गृह निर्माण भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मानहुँकोटको सार्वजानिक जग्गा संरक्षण गर्न दुई महिनासम्मको लागि जग्गा किनबेच प्रतिबन्ध लगाइएको उहाँले बताउनुभयो ।